ZveWiricheya - Saizi Inokosha Chaizvo!
Zvinoitika kakawanda, munhu anoshevedza a wiricheya mugadziri achitarisa kutenga wiricheya. Kana ivo vakangoerekana vabvunzwa saizi yavari kutsvaga mhinduro yakajairika ndeyekuti "ingori saizi yakajairwa".
Iri idambudziko, ungaenda kuchitoro cheshangu unotenga "saizi yakajairwa"? Iwe unofanirwa kuyeuka kuti kunyangwe iwe uriwe muchengeti kana hama, uyo anogona mushandisi anofanira kunge aine chaiyo saizi sachigaro zvinoenderana nezvavanoda. Uine wiricheya, saizi inogona kunyatso kuve yakakosha pane iyo yese. wiricheya saizi yakakosha zvakanyanya kana zvasvika pakutenga chigaro.
Kuyera kwe wiricheya
Iko kune kazhinji zviitiko apo munhu asina kubvunza nezve yakatarwa saizi, uye ikozvino vane mamwe matambudziko epanyama kupfuura zvavakatanga nawo. Kuyera kwe wiricheya inogona kuve sarudzo yakanyanya kukosha yawati waita. Kazhinji munhu anoshandisa wiricheya vachapedza yakawanda nguva yavo vakagara pachigaro. Dzimwe nguva vanogona kupedza nguva yakareba vari pachigaro cheya kupfuura ivo pamubhedha wavo.
Kudzivirira Pressure Ulcers
Apo a wiricheya chigaro chakamanikana zvakanyanya kumushandisi, chinokonzeresa kukakavara pahudyu nemuhudyu repamusoro nzvimbo. Izvi zvinogona kukonzeresa kuti mushandisi awane madzvinyiriro emaronda kana maronda ari kusimuka kubva pachigaro chakareba pachigaro chakamanikana. Zvakare kana chigaro chakamanikana uye chisina kuitirwa munhu wacho, zvinogona kunyatso kuomera mushandisi chinja mukati nekubuda pachigaro.
Izvi zvinogona kutungamira kune mushandisi kuwira pamusoro kana kuvakuvadza ivo mukuita kwekuchinjisa. Mushandisi anogona zvakare kurwadziwa nemudumbu, nekuti mushandisi akanyatsosungirirwa pachigaro, izvi zvinogona kuita kuti vave nemamwe matambudziko pasi pemutsara.
kana wiricheya yakafara kwazvo kumushandisi, ichavaitisa kuti vagare vachida kusendamira kudivi rimwe kana rimwe kuti rienzane. Izvi zvinogona kukonzera kuti mushandisi ave nenyaya dzekumira, kunyanya vanozomesa musana wavo kuti vasasimudzirwe vakagara. Kana mushandisi achida kuvasimudzira ivo uye iyo wiricheya rakapamhamha zvakanyanya, zvinogona kuvakonzera kuti vatambanudze maoko avo zvakanyanya, zvichitungamira tsinga dzemhasuru kana zvakatonyanya, misodzi yemhasuru.
Wiricheya yakajairwa chigaro kusvika pasi pakakwirira nharaunda:
Vakuru - 19 inches
Hemi - 17 1/2 inches
Super Hemi - 15 1/2 inches
Super Low - 14 1/2 inches